डाक्टरहरुले नै भोलिबाट देशभरका अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द गर्ने जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
डाक्टरहरुले नै भोलिबाट देशभरका अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द गर्ने
जनबोली/ १७ चैत, काठमाडौं । अनसनरत डा. गोविन्द केसीका माग पुरा गराउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आहृवानमा डाक्टरहरुले बुधबारबाट देशभरको अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द गर्ने भएको छ ।
संघको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले सरकारले डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । भोलिबाट देशभर ओपीडी सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं संघका अध्यक्ष अन्जनीकुमार झाले बताए ।’
डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको र सरकारले माग सम्बोधन गर्न ढिला गएकाले ओपीडी बन्द गर्ने निर्णय गरिएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति रेग्मीले बताए । उनले भने अस्पतालमा भएका बिरामीहरुलाई हुर्नुपर्‍यो । तर, ओपीडीमा नयाँ बिरामी लिँदैनौं ।’
चिकित्सक संघले ४८ घन्टाभित्र डा. केसीका मागहरु पुरा नभए आकस्मिक सेवा समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका १० बुँदे माग राखेर केसी १० दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् ।